Munaasabad ALLA BARI ah oo loogu duceeynayay dadkii lagu laayay qarixii TIYAATARKA oo lagu qabtay GOTHENBURG. | Anti-Tribalism
← Kulan Baroordiiq ah oo ka dhacay caasimada Sweden Stockholm oo loo sameeyay Aadan Wiish iyo Saciid Mugaanbe
Khaatumo dagaal uma baahna →
Munaasabad ALLA BARI ah oo loogu duceeynayay dadkii lagu laayay qarixii TIYAATARKA oo lagu qabtay GOTHENBURG.
(In Konis iyo Ex-Luceillo loogu magacdaro Wiish iyo Mugaambe oo lasoo jeediyay)
April 06, 2012 (MMG) – Kulan loogu baroor diiqayay dadkii ku dhintay qarixii tiyaarka qaranka looguna duceeynayay kuwii ku dhaawacmay oo ay isku soo duba rideen qaar ka tirsan bahada ciyaaraha iyo saxaafadda ayaa lagu qabtay magaaladan Gothenburg.
Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen kana soo qaybgaleen qaar ka tirsan bahda saxaafadda, ciyaaraha, waxgaradka iyo marti sharaf kale oo ku dhaqan magaaladan Gothenburg iyo magaalooyinka u dhow.
’’20 sano waanu duceeyneyney laakiin meelna ma gaarto, waayo carabkeenna iyo qalbigeenna ayaan iska war haynin’’ ayuu yiri Maxamed Nuur oo niyad jab ka muujiyay xal la’aanta dhibaatooyinka isa soo taraya ee lagu gumaadayo shacabka biri magaydada ah oo ah dadkii gallad loo gaysan lahaa.
Sheekhunaa oo ka tirsan bahda isboortiga aadna uga hadlay Siciid Mugaambe oo ay saaxiibo ahaayeen ayaa fikradaa la qaba ’’Marka uu dhib dhoco unbaan barooranaa, marka kalana waxaan u dhaqanaa sidii inaysan wax mas’uuliyad ihi naga saareyn waxa dalka ka dhacaya’’ ayuu yiri isagoo Soomaalida qurbaha joogta iyo kuwa dalkii lagu qalayaba ku canaantay inay qaniinyada uun dareemaan laakiin aysan lahayn wax qorshe ah kahor iyo kadiba.
Cabdi Shakuur Cilmi Kaarshe ayaa dhaliilay hanaanka muhiimad siinta iyo juhdiga dheeriga ah ee ay dowladdu ku bixisay xuska sanad guuradii 1-aad ee kasoo wareegtey dib u aasaaska TV-ga qaranka xilli uu amaanku wax ka qabasho badan u baahan yahay ’’In intaas oo wasiir iyo wasiirkii 1-aad iyo madax rayid ihi wax intan le’eg iskugu yimaadaan ayaanba micna wayn sameeyneynin’’ ayuu yiri Kaarshe oo madaxda dowladda usoo jeediyay inay yareeyaan meel walba istaaga.
Macalin Ismaaciil Firimbi oo ahaa garsoore caalami ah ayaa ku dheeraaday ka hadalka marxuum Wiish oo uu sheegay inay aad isu garanayeen oo ay isku lood ahaayeen isagoo muujiyay inuu si aad ah uga naxay geerida mowtul fajaha ahayd ee ragaasi ku timid.
Daa’uud Odaysuge ayaa ka hadlay waxqabadkii hay’adaha ciyaaraha oo ay raga dhintay maamuli jireen oo mudadii burburka inta badan shaqeeynayay isagoo sheegay inaysan istaahil ahayn in ragaas qaaliga ah loo dilo siyaasad aysan shuqul ku lahayn ’’Mabda’u wuu kala duwanaan karaa laakiin dantu waa inay midaysnaataa’’ ayuu yiri Daa’uud oo farta ku godey sida ay muhimka u tahay in dadka waxgaradka ah la badbaadiyo.
Oday Cosoble oo ka tirsan waayeelka magaalada oo runtii aad u qiiraysnaa ayaa tilmaamay in hadii ay sidan ku socoto aysan dadka wax qumani ka hari doonin ’’War dadka dhamaanayaa waa goowsihii umadda’’ ayuu ku qayliyay Oday Cosoble oo xaalka ka dayriyay marka ay isusoo haraan isma dhaanto iyo dhasheed isagoo ku baaqay in sida la isu dhaamo.
Waxaa sidoo kale hadallada dadka kusoo noqnoqanayay habacsanaanta habdhiska amaanka ee DKMG ah oo u muuqda mid biya days badan iyo iska war qab la’aanta iyo heerka wada shaqeyneed ee liita ’’Hadii aan maanta iraahdo askari baan qoranayaa way ii soconeysaa, laakiin horta ya og waxa aan ahay’’ ayuu is waydiiyay Yuusuf Xasan Cali oo ka mid ah dadkii goobta ka hadlay.
Ugu dambeyntii Macalin Aadan Oor oo ku hadlaayay magaca bahda isboortiga ayaa wuxuu talo ku soo jeediyay si aan loo iloobin taarikhda halganka isboorti iyo kaalinta ay kaga jireen bulshada rayidka ah guud ahaan in garoonka KONIS STADIUM oo aan lahayn magac Soomaaliyeed loogu magac daro Adan Yabarow (Wiish) iyo in Saciid Maxamuud Nuur ( Mugaambe ) loogu magacdaro garoonka kubadda koleyga ee ex-Luciello ( Luujelo ). Isagoo bahda isboortiga ee gobolka Banaadir ku boorriyay inay arintaa la qaataan taasoo noqotay fikrad ay u riyaaqeen dhamaan dadkii kasoo qaybgalay munaasabadan baroordiiqda ahayd.
Xafladda ayaa waxaa laf dhabar iyo udub dhexaad u ahaa dadka hoos ku xusan:
1. BAHDA ISBOORTIGA
2. BAHDA SAXAAFADDA
3. WAXGARADKA MAGAALADA GOTHENBERG
1. Aadan Oor ( ciyaartoy hore )
2. Macallin Ismaaciil Firimbi ( garsoore caalami ahaan jiray )
3. Maxamad Xaaji Xuseen Raage ( Bahda saxaafadda )
3. Goobdoon ( Bahda saxaafada )
4. Axmadey Ismaaciil ( Ciyaartooydii hore )
5. Cabdulkaadir Sheekuna ( Somaliska Rikis )
6.Cosoble ( Odoyasha Soomaaliyeed )
7. Oday Nageeye
8. Cabdishakuur Kaarshe
9. Daa’uud Odaysuge
12. Oday Xuseen
13. Yuusuf Xasan
14. Cali Layloon